Waa kuwee kooxaha dhibcaha ugu badan ku helay garoonkooda taariikhda horyaalka Premier League? – Gool FM
Waa kuwee kooxaha dhibcaha ugu badan ku helay garoonkooda taariikhda horyaalka Premier League?
(England) 16 Okt 2016 – Taariikhda horyaalka Premier League marka dib loo raaco kooxo ayaa ku xoog badan garoonkooda oo goolasha ugu badan ku dhaliya gurigooda, halka kuwo kale ay jecel yihiin inay goolal badan dhaliyaan marka ay martida yihiin.
Haddaba waxaan halkaan ku eegeynaa kooxaha dhibcaha ugu badan ku helay garoonkooda taariikhda horyaalka Premier League.
Kooxda Manchester United ayaa hoggaanka u haysa kooxahaas oo garoonkeeda ku heshay 1,103 (Kun boqol iyo saddex dhibcood), waana kooxda dhibcaha ugu badan ku heshay garoonkeeda taariikhda EPL.
Arsenal ayaa kaalinta labaad ku jira oo ah kooxda labaad ee dhibcaha ugu badan ku heshay gurigeeda taariikhda Premier League waxaana ay ku heshay 1,002 (Kun iyo labo dhibcood).
Kooxda Chelsea ayaa ah kooxda saddexaad ee dhibcaha ugu badan ku heshay garoonkeeda taariikhda Premier League taasoo ku heshay 981-dhibcood, halka Liverpool ay ku jirto kaalinta afaraad iyadoo garoonkeeda Anfield ku heshay 958 dhibcood Premier League.
Tottenham ayaa dhammaystirtay shanta kooxood ee dhibcaha ugu badan ku heshay garoonkeeda Premier League waxaana ay ku uruursatay garoonka White Hart Lane 829 dhibcood.
Shantan kooxood ayaa ah kuwa dhibcaha ugu badan ku helay garoonkooda:-
Man Utd – 1,103
Arsenal – 1,002
Chelsea – 981
Liverpool – 958
Spurs – 829
AC.Milan oo Chelsea la furtay wadahadalo ay ku doonayso Cesc Fabregas
Man United oo diyaarsatay dalab qaali ah si ay u soo xerogaliso Antoine Griezmann